နိုဝင်ဘာလ 2018 - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ်မှ WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-30
ဇူလိုင်လ 2, 2019 နိုဝင်ဘာလ 30, 2018 by Webtk.co
Webtalk All-In-One ကိုလူမှုစျေးကွက် & ဆက်သွယ်ရေး Utility ကိုသငျသညျဆကျသှယျကူညီခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲရန်တည်ဆောက်
* မူပိုင်ခွင့်-ရွှေ့ဆိုင်း SocialCRM ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: computing, Dropbox ကို, Facebook က, ဆော့ဖျဝဲ Go, LinkedIn တို့, လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ပျင်းရိ, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, Software များ, စျေး၏တောင်ဘက်, ဆန်ဖရန်စစ္စကို, တွစ်တာ, universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း apps များ, Web ကို 3.0, Webtalk Verify မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-28
ဇူလိုင်လ 2, 2019 နိုဝင်ဘာလ 28, 2018 by Webtk.co
ယနေ့ မှစ. ကတည်းက MY 8-YEAR တွင်နှစ်မြောက် WEBTALK (အရာရှိတဦးက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှစ်ပတ်လည်နေ့) မတ်လ၌တည်ရှိ၏
"အသက်တာ၌ကိုယ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ရှာတွေ့နှင့်သင့်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: ဆောင်းပါးများ, အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို, တက္ကဗေဒ, အဘိဓမ္မာ, အသက်တာ၏ဒဿန, ဘာသာတရားနှင့်သိပ္ပံပညာ, RJ Garbowicz, social networking service ကို, လူမှုကွန်ယက်, SocialCRM, ဝိညာဉျ, Webtalk'' s ကိုရည်မှန်းချက်, Webtalk'' s ကိုမစ်ရှင် မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-26
ဇူလိုင်လ 2, 2019 နိုဝင်ဘာလ 26, 2018 by Webtk.co
WEBTALK UPDATE: ယခုကြှနျုပျတို့ 1.6M အသုံးပြုသူများစံချိန်ကြနဲ့ Amazon Alexa အဆိုအရကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်း 24K က်ဘ်ဆိုက်များအတွင်းအဆင့်ကြသည်!
ကျနော်တို့ 2M USER ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကျနော်တို့အသစ်ကပြိုင်ပွဲကြေညာပါလိမ့်မည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, မိုက်ခရိုဘောဂဗေဒ, ရည်ညွန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Webtalk စာရင်းအင်း မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-21
ဇြန္လ 30, 2019 နိုဝင်ဘာလ 21, 2018 by Webtk.co
မင်္ဂလာကျေးဇူးတုံ့ပြန်လူတိုင်း! သငျသညျအမေရိကန်အားလပ်ရက်ဆင်နွှဲကြဘူးဆိုရင်တောင်ကျနော်တို့၏အရည်အသွေးရုတ်သိမ်းပေးရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို supporting အဘို့သင်တို့ရှိသမျှရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်လို့ပြောချင် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: ရစ်ချက်နစ်ဆင်၏ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်, SocialCRM, ပျော်ရွှင်မှု၏အနုပညာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး, Webtalk'' s ကိုရည်မှန်းချက်, Webtalk'' s ကိုမစ်ရှင် မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-20
ဇြန္လ 29, 2019 နိုဝင်ဘာလ 20, 2018 by Webtk.co
WEBTALK USER မှ UPDATE: (မ SHARE လုပျဆောငျ: အားလုံးအသုံးပြုသူများ Posted)
Webtalk ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများပြည်သူ Beta ကိုပစ်လွှတ်ကတည်းကပျမ်းမျှ 100% လစဉ်ထက်ပိုပြီးကြီးထွားလာနှင့်ယခုကြှနျုပျတို့တစ်ခုနှင့်အတူ 1.55 အသုံးပြုသူသန်းရှိနေသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, e-commerce, Facebook က, လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ဓာတ်ပုံဝေမျှခြင်း, RJ Garbowicz, လူမှုသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, Software များ, universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း apps များ, Webtalk'' s ကိုရည်မှန်းချက်, Webtalk'' s ကိုသမိုင်း, Webtalk'' s ကိုမစ်ရှင်, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-11-15-2 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
ဇြန္လ 29, 2019 နိုဝင်ဘာလ 15, 2018 by Webtk.co
ပြီးခဲ့သော ... WE FOR တစ်ဦးက WINNER ဖူး WEBTALK"S မိုဘိုင်းဖုန်း DESIGN ပြိုင်ပွဲ !!!!!
ငါကလူတိုင်းထိပ်ဒီဇိုင်းများအပေါ်မဲပေးရှိသည်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သိကြပေမယ့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: peek, Webtalk app ကို မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-15
မတော်တပို့ WEBTALKအဖွင်! Webtalk ယခု 1.5 အသုံးပြုသူသန်းရှိပြီးကမ္ဘာ့ TOP 25K နေရာများအတွက်အဆင့်နေပါသည်!
ကြှနျုပျတို့၏ Beta စမ်းသပ်ခြင်းစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်အလွန်သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ပါသည်
အတော်များများက ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: antivirus software ကို, ဒေတာဘေ့စ, အီးမေးလ်လိပ်စာ, Microsoft က, Microsoft က Office ကို, Outlook.com, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, webmail, Webtalk စာရင်းအင်း, Webtalk'' s ကိုလမ်းပြမြေပုံ, Windows Live မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-11-12
ဇြန္လ 26, 2019 နိုဝင်ဘာလ 12, 2018 by Webtk.co
ကျွမ်းကျင်သူ MOBILE UI ကို / UX ကို DESIGN & Animation မှုရပြီ ??? Webtalk ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အ 99Designs အပေါ်တစ်ဦးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြေးနေသည် မိုဘိုင်း app အဆိုပါအဘို့ထိပ်တန်းဒေါ်လာစျေးပေးဆောင်ဒီဇိုင်းများ အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်နာများ !!!